China Bakeware na divider SKU NO.2640-2642 Manufacturers na Suppliers | SJZ JINXUAN
Ekwentị: +86 311 8961 9000
Tụọ Cup & n'akụkụ
Acha Borosilicate Glass
Ugboro abụọ Wall Glass Cup, Tumbler & Foto Ụlọ Nga
Single Wall Glass Cup, Tumbler & Foto Ụlọ Nga
Kwes Bar & nkuru n'onwe Glass
Tea ite & Coffee ite & Maker
Karafe, decanter, n'akụkụ & ite
Nchekwa ite & Honey ite
Mmanya & Oil karama
Ugboro abụọ Wall Glass Bottle
Kalama na Yi Silicon mkpuchi Ndị ọzọ
Tea ite SKU NO.1534
Glass Tea Foto Ụlọ Nga na nyo SKU NO.1427
Ugboro abụọ Wall Glass Foto Ụlọ Nga SKU NO.12130
Ịgwakọta Bowl SKU NO.2950-2951-2952-2953-2954
Casserole na gburugburu udi SKU NO.271-272-273-274-275-276
Bakeware na divider SKU NO.2640-2642
Ahụkebe Kitchen-to-Isiokwu egosipụta Ime, ozi, ụlọ ahịa, na reheat niile na otu bakeware. The iko mmiri efere ka o di mfe esi nri n'ihu oge na ụlọ ahịa na friji ma ọ bụ friza mgbe e mesịrị. Best niile, bakeware ikwu n'ụzọ mara mma si oven ọ bụla table-esetịpụrụ keugwu serving, na rifọrọ erifọ nwere ike ịga nri azụ na ngwa nju oyi na njedebe nke abalị-dịghị mkpa na-unyi multiple efere. Biko Mata: adịghị akpali iko bakeware kpọmkwem site friza na oven. Ka ...
Ahụkebe Kitchen-to-Isiokwu egosipụta
Ime, ozi, ụlọ ahịa, na reheat niile na otu bakeware. The iko mmiri efere ka o di mfe esi nri n'ihu oge na ụlọ ahịa na friji ma ọ bụ friza mgbe e mesịrị. Best niile, bakeware ikwu n'ụzọ mara mma si oven ọ bụla table-esetịpụrụ keugwu serving, na rifọrọ erifọ nwere ike ịga nri azụ na ngwa nju oyi na njedebe nke abalị-dịghị mkpa na-unyi multiple efere.
Biko Mata: adịghị akpali iko bakeware kpọmkwem site friza na oven. Ka nri igbaze tupu nri ma ọ bụ reheating na oven. Jide n'aka na-eji a potholder mgbe na-ejizi na-ekpo ọkụ na iko bakeware efere.
Oven na Microwave Safe
The iko mmiri efere nwere ike iji na akpọọ nkụ ma ọ bụ reheat nri a ot oven ma ọ bụ na a ngwa ndakwa nri oven. Lee site iko n'akụkụ ekwe maka effortlessly peaking na ọganihu nke ihe oriri mgbe mmiri, na-enye kwukwara achịkwa ikpeazụ pụta.
Ndị a bakeware na-ji borosilicate iko-mma n'ihi na thermal mgbasa na ya mere obere ewekarị gbajaa mgbe ọ gụrụ okpomọkụ mgbanwe.
Biko Mata: Glass bakeware kwesịghị iji n'okpuru a imi, na a stovetop, ma ọ bụ na-aba n'anya ma ọ bụ mkpọ okpomọkụ burners dị ka a kpọmkwem okpomọkụ isi iyi.
Ndị a Bakeware na divider nwere ike ikewapụ nri effeciently, na-ezere metọworo ọzọ odors, otú i nwere ike na-enwe na mbụ ọhụrụ nri.
Previous: Bakeware na Square Ọdịdị
Next: Casserole na oval udi SKU NO.277-278-279-2710-2711
Bakeware na akụkụ anọ nkebisi SKU NO.2614D
Bakeware na akụkụ anọ Ọdịdị na eyi mkpuchi
Bakeware na oblong udi na emefu SKU NO.261 ...
Bakeware na gburugburu udi
Bakeware na oval udi na emefu SKU NO.226-269
[Copy] Bakeware na divider SKU NO.2643
RM705, ụlọ NO.D, MEIDONG mba, NO.16 GUANGAN Street, SHIJIAZHUANG, CHINA, 050011
Anyị ga-aga na-abịa 125th Spring ...
Glass Cups With Silicone Sleeve, Borosilicate Glass Bottle, Glass Bottle With Colorful Silicon Coating, Borosilicate Glass Mmanya & Oil Bottle, Borosilicate Glass Bottle With Silicon Sleeve, Borosilicate Glass Bottle With Bamboo Lid,